1 Samoela 18 - Ny Baiboly
1 Samoela toko 18
Fitiavan'i Jonatasy an'i Davida - Hiran'ny vehivavy amin'Israely - Fialonan'i Saola an'i Davida - Fanomezan'i Saola an'i Mikola zanany vavy ho vadin'i Davida.
1Nony tapitra niteny tamin'i Saola Davida, dia raiki-pitia tamin'ny fanahin'i Davida ny fanahin'i Jonatasy, ka tia azy toy ny ainy Jonatasy. 2Androtr'izay ihany, dia noraisin'i Saola Davida ka tsy navelany hody any an-tranon-drainy. 3Ary Jonatasy nanao fanekem-pihavanana tamin'i Davida, fa tia azy toy ny ainy izy. 4Ka notsoahan'i Jonatasy nomena an'i Davida ny kapaoty nentiny, toy izany koa ny akanjo fiadiany, mbamin'ny sabany, hatramin'ny tsipìkany sy hatramin'ny fehin-kibony. 5Raha nivoaka Davida na aiza na aiza no nanirahan'i Saola azy dia nahomby izy; nataon'i Saola filohan'ny lehilahy mpiady izy, ary nankasitrahan'ny vahoaka rehetra hatramin'ny mpanompon'ny mpanjaka aza.
6Nony niditra izy ireo, tamin'ny niverenan'i Davida avy namono ilay Filistina, dia nivoaka avy tamin'ny tanànan'Israely rehetra ny vehivavy, nihira sy nandihy teo anoloan'i Saola mpanjaka, an-kafaliana, tamin'ny feon'ny ampongatapaka sy ny valiha. 7Ka nifamaly ny vehivavy, ny mpandihy, nanao hoe:
Arivoarivo no matin'i Saola,
Fa alinalina kosa, ny an'i Davida.
8Tezitra mafy Saola ary tsy sitrany izany teny izany, ka hoy izy: Ny an'i Davida nataony alinalina, fa ny ahy kosa nataony arivoarivo ka ny fanjakana izany no sisa tsy azony. 9Hatramin'izay andro izay dia ratsy fijery an'i Davida Saola.
10Ny ampitson'izay dia nisy fanahy ratsy avy tamin'Andriamanitra nilatsaka tamin'i Saola, ka nihoalahoala teo afovoan 'ny tranony izy. Dia nitendry harpa, araka ny fanaony amin'ny andro hafa Davida, ary teo an-tànan'i Saola ny lefony. 11Nampandihizin'i Saola ny lefony; sady nataony hoe: Hataoko indray migorobaka Davida sy ny rindrina. Kanjo indroa Davida no nihodivitra teo anoloany. 12Dia natahotra an'i Davida Saola, satria nomba azy Iaveh, fa Saola kosa nialany; 13ka nataon'i Saola lavitra azy izy, ary natsangany ho mpifehy arivo lahy. Ary nivoaka sy niditra teo anatrehan'ny vahoaka izy. 14Nampiseho fahakingana tamin'izay rehetra nataony Davida ary nomba azy Iaveh. 15Natahotra azy Saola nahita ity izy hendry dia hendry; 16fa Israely sy Jodà rehetra kosa tia an'i Davida, noho izy nivoaka sy niditra teo anoloan'izy ireo.
17Ary hoy Saola tamin'i Davida: Indro homeko ho vadinao Meroba, zanako vavimatoa. Misehoa ho mahery fo anefa hianao, ary tohàny ny adin'ny Tompo. Fa Saola nanao anakampo hoe: Aza ny tànako no mamely azy, fa aoka ny tànan'ny Filistina no hamely azy. 18Dia namaly an'i Saola Davida nanao hoe: Zinona moa aho, zinona ny aiko, ary zinona ny fianakavian'ikaky eo amin'Israely, no dia ho vinanton'ny mpanjaka aho? 19Kanjo nony tonga ny fotoana tokony hanomezana an'i Meroba zanakavavin'i Saola, ho vadin'i Davida, dia nomena ho vadin'i Hadriela, any Molati, indray kosa izy.
20Ary Mikola zanakavanin'i Saola tia an'i Davida; dia nampandrenesina an'i Saola izany, ka nankasitrahany. 21Hoy Saola anakampo: Homeko azy izy, mba ho fandrika ho azy, ka hamelezan'ny tànan'ny Filistina azy. Dia hoy Saola tamin'i Davida fanindroany: Ho tonga vinantoko hianao anio. 22Ary nomen'i Saola didy ny mpanompony, nataony hoe: Miresaha mangingina amin'i Davida ataovy hoe: Raiki-pitia anao ny mpanjaka, ary tia anao koa ny mpanompony rehetra, ka aoka ho vinanton'ny mpanjaka hianao amin'izao. 23Dia nolazain'ny mpanompon'i Saola tamin'i Davida mba ho ren'ny sofiny izany teny izany; ka hoy ny navalin'i Davida: Fa ataonareo ho zavatra kely ve izany ho vinanton'ny mpanjaka e? Izaho dia olo-mahantra sy iva razana. 24Notaterin'ny mpanompon'i Saola taminy izany, nataony hoe: izany no teny nataon'i Davida. 25Dia hoy Saola: Izao no holazainareo amin'i Davida: Tsy mila zavatra akory ho vody ondry ny mpanjaka, fa hodi-tsy miforan'ny Filistina zato lahy, mba ho voavaly faty ny fahavalon'ny mpanjaka. Ny hisamboran'ny tànan'ny Filistina an'i Davida no nampoizin'i Saola tamin'izany. 26Dia nolazain'ny mpanompon'i Saola tamin'i Davida izany teny izany, ka nankasitrahan'i Davida izany hoe ho tonga vinanton'ny mpanjaka izy. 27Ary tsy mbola tapitra akory ny fetr'andro dia nitsangana Davida ary niainga izy sy ny olony, namono roan-jato lahy tamin'ny Filistina sy nitondra ny hodi-tsy miforan'izy ireo Davida; ary nomeny ny mpanjaka araka ny isany marina mba hahatonga azy ho vinantony. Ka dia nomen'i Saola ho vadiny Mikola zanany vavy. 28Hitan'i Saola sy fantany tsara, fa omban'ny Tompo Davida, ary Mikola zanakavavin'i Saola dia tia an'i Davida. 29Ka nitombo ny fahatahoran'i Saola an'i Davida ary nitsangan-ko fahavalon'i Davida Saola isan'andro isan'andro.
30Tonga nanafika ireo andrianan'ny Filistina ary isaky ny nivoaka ireny, dia nahomby nandresy azy Davida noho ny fahakingany mihoatra noho ny mpanompon'i Saola rehetra, ka tonga malaza indrindra ny anarany. >